वैदेशिक लगानी प्रस्ताव सात दिनमै स्वीकृत – Saurahaonline.com
वैदेशिक लगानी प्रस्ताव सात दिनमै स्वीकृत
काठमाडौं ०२ चैत्र । संघीय संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता समितिले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल भित्रिने वैदेशिक लगानीको प्रस्ताव सात दिनभित्र स्वीकृत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बैठकले विधेयक संशोधन गर्दै घरेलु तथा साना उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नपाउने गरी रोक लगाउने व्यवस्था पनि गर्न लागेको छ।
यस्तो वैदेशिक लगानी स्वीकृत गर्दा शर्तसमेत तोक्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा गरिएको छ। विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको वैध स्रोत घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो स्रोतको वैधता पुष्टि भएको अवस्थामा मात्रै वैदेशिक लगानी नेपालमा भित्र्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
समितिको बैठकले विधेयक संशोधन गर्दै घरेलु तथा साना उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नपाउने गरी रोक लगाउने व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार माछापालन, फलफूल तथा तरकारी, मौरी पालन, दुग्ध व्यवसाय, तेलहन, दलहन, कुखुरा पालन, पशुपंक्षी पालन तथा कृषिको प्राथमिक तहको उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नपाउने व्यवस्था संशोधनमार्फत गरेको छ। यस्तै, कपाल काट्ने, सिलाइ, ड्राइभिङ क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
‘वैदेशिक लगानी कानुनमा हतार नगरौं
सांसद विनोद चौधरीले वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धनजस्तो महत्वपूर्ण कानुन निर्माणमा गम्भीर बन्न सरकार र सांसदको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संसद्को उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हितसम्बन्धी समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि विशेषज्ञको हैसियतले धारणा राखेका थिए ।
चौधरीले नेपालमा वैदेशिक लगानी बढ्न नसक्नुका कारणबारे गहिरो अध्ययन हुनुपर्ने र सोही आधारमा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनी बहुराष्ट्रिय कम्पनी सीजी कर्प ग्लोबलका अध्यक्ष हुन् । ‘वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन ९फिट्टा० लगानीको क्षेत्रमा दूरगामी असर गर्ने ऐन हो । लगानीको भविष्य कोर्ने ऐनलाई पर्याप्त मात्रामा छलफल गरेर मात्रै ल्याउनुपर्छ’, चौधरीले भने, ‘अन्यथा सरकारले सोचेजस्तो तथा निजीक्षेत्रले चाहेजस्तो लगानी भित्रिन सक्दैन ।’ नेपालमा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न सकिएको छ भने त्यसको अनुभव गर्न सकिएको छैन भन्दै उनले त्यसका कारण पहिल्याएर मात्रै आगामी दिशा तय गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले हतारमा कानुन ल्याउनका लागि मात्रै कानुन निर्माण गरे देश पुरानै समस्यामा रुमलिइरहने बताए ।
लगानी सम्मेलनको मुखमा संसदीय समितिहरूले समानान्तर रूपमा विधेयकहरू छलफल गराइरहेका छन् । ‘सरकारले हतार गरिरहेको छ । जति विधेयक आइरहेका छन्, प्रत्येक ऐनलाई समय लगाएर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले त्यस्तो देखिएको छैन’, उनले भने । एकातिर सेज ऐनबारे छलफल चलाइएको छ भने अर्कोतिर सार्वजनिक–निजी–साझेदारी ऐनलाई बहसमा ल्याइएको छ । एन्टी डम्पिङ ऐन पनि छलफलमा छ । यसरी एकैचोटी सबै विधेयक पेश गर्नुभन्दा प्रत्येकमा दफावार छलफल गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । तीन वर्षअघिको सम्पन्न लगानी सम्मेलनको स्मरण गर्दै चौधरीले त्यतिबेला १४ खर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी भिœयाउने प्रतिवद्धता प्राप्त भए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै यसलाई नजीरका रूपमा लिँदै आगामी सम्मेलनलाई व्यवहारमै सफल बनाउनुपर्ने बताए ।
चौधरीले भारत र चीन ‘बिगेस्ट एन्ड द मस्ट भाइब्रेन्ट फ्याक्ट्रिज अफ द वल्र्ड’ का रूपमा चिनिने र यी देशका उत्पादन लागत विश्वमै सबैभन्दा सस्तो रहेको पृष्ठभूमिमा नेपाली उत्पादनले यी देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन रहेको वास्तविकता औंल्याए । ‘कानुन बनाउँदा कुन कुन क्षेत्रमा हामीले राम्रो गरेका छौं ? कुन कुन क्षेत्रमा हामी खस्किएका छौं ? कि खस्किँदै छौं ? कुन क्षेत्रको उत्पादन लागत घट्दै छ अनि कुन क्षेत्रको बढ्दै छ ? सम्पूर्ण विषयमा गम्भीर छलफल गरेर मात्र कानुन ल्याउनुपर्छ’, उनले भने । अन्नपुर्णमा समाचार छ ।